Warshadaha Gawaarida Gawaarida Gawaarida | Samatabbixin
Codsiga: Haamaha aan cadaadiska la saarin iyo haamaha keydka.
Dusha sare ee furan waa bir bir ah oo dhumuc gaar ah leh markii ay ka baxeyso warshadda, iyo saxan bir ah oo dhumucdiisuna gaar tahay oo ballaadhkeeduna duuduuban yahay iyadoo la raacayo shuruudaha isticmaalaha. Saxanka asalka ah ee sagxadda ah ayaa loo rogaa cabirka looga baahan yahay heerka qaran marka uu ka baxo warshadda. Guud ahaan, saxanka asalka ahi wuxuu leeyahay cabir adag, waxqabad wanaagsan iyo qiimo sare. Furitaanka kiniinku waa mid jaban.
Dhumucda guddiga fidsan waa 1.5-20mm, maaddaduna waa Q235 iyo Q345. Ka dib furitaanka, dheellitirka, qiyaasta, iyo xiirashada, waxay noqoneysaa saxan fidsan oo leh dhererka iyo ballaca loo baahan yahay. Waxay ku habboon tahay in lagu farsameeyo taargooyinka qabow-duuban, taarikada galvanized, taarikada dahaarka leh ee midabka leh, iyo taarikada birta aan lahayn.
Faa'iidooyinka waa sida soo socota
1. Qiimuhu waa jaban yahay dhererkiisana si xor ah ayaa loo go’aansan karaa;
2. Ku habboon gaadiidka, iyadoon loo eegin cabirka saxanka birta; Sidoo kale aad ayey ugu habboon tahay in la raro oo laga soo dejiyo konteynarrada, sidoo kale aad ayey ammaan u tahay inta lagu jiro gaadiidka. Marka la barbardhigo gariiradda galvanized, waxay leedahay habboonaan iyo badbaado weyn inta lagu jiro gaadiidka
3. Goynta ayaa ku habboon, maaddadana waa la jari karaa iyadoo loo eegayo baahida dhabta ah ee cabbirka saxanka birta ah;
4. Si wax ku ool ah u keydso qalabka. Tusaale ahaan, taangiga kaydku wuxuu u baahan yahay 20 taariko bir ah oo 6800 × 1500 × 6 ah. Taarikada biraha suuqa guud ahaan waa 6000, 8000, iyo 9000 dherer. Haddii taarikada birta ah ee suuqyada la isticmaalo, waxaa jiri doona dheeri yar. Saxanka furan, 6900 saxan bir ah ayaa si toos ah loo isticmaali karaa, taas oo keydineysa walxaha, taas oo sidoo kale ah faa'iidada ugu weyn. Gaar ahaan alaabada birta ah, saameynta keydinta qalabka iyo yareynta kharashka waa mid aad u muuqata.
Waxyaabaha: SGCC, S350GD + Z, S550GD + Z, DX51D, DX52D, DX53D
Dahaarka Zinc: 40-275G / M2
Spangles: Maya Spangle / Spangles
Farsamada: Kulul duuban / Qabow duuban
Baako: heerka dhoofinta dhoofinta
Daaweynta dusha sare: saliid, passivity ama passivity-ka chromium-ka, passivation + saliideysan, passivation-ka chromium-ka + saliideysan, u adkaysanaya faraha ama u-adkaysiga faraha-ka-chromium-la'aanta.
Hore: Biibiile toosan
Xiga: Gariiradda biraha kulul ee duuban
Tayada Koowaad, Nabadgelyo Balanqaad